We.com.mm - Endgame မှာ ကပ္ပတိန်အမေရိက က ဘာလို့ သောရ်ရဲ့တူကြီးကို ကိုင်နိုင်ခဲ့တာလဲ?
Avengers: Endgame ရုံတင်ပြသပြီးချိန်မှာ Endgame နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ အငြင်းပွားစရာတွေလည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲကတစ်ခုကတော့ Captain America ခေါ် စတိဗ်ရော်ဂျာက Thor ရဲ့ Mjolnir တူကြီးနဲ့ ဗီလိန်ကြီး Thanos ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ အဖြစ်ပါပဲ။ ကပ္ပတိန်အမေရိကတစ်ယောက် သောရ်ရဲ့တူကြီးကို ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချို့ပရိသတ်တွေက အဲဒီဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ Endgame ရဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းအဖြစ် သြဘာပေးခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ ကတော့ သောရ်ကလွဲပြီး ဘယ်စူပါဟီးရိုးမှ မကိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ သောရ်ရဲ့တူကြီးကို ကပ္ပတိန် ကိုင်ပြလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားမလည်နိုင်ပဲ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကပ္ပတိန်အမေရိကဇာတ်ကောင်က သောရ်ရဲ့တူကို ကိုင်နိုင်တာဟာ အခု “Live Action” မှာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ Avengers စူပါဟီးရိုးတွေ အစပျိုးရာ မာဗယ် comic တွေမှာကတည်းက တူကို ကိုင်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မာဗယ် comic နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကပ္ပတိန်အမေရိကဇာတ်ကောင်နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ပရိတ်တွေအတွက်တော့ လက်သင့်ခံနိုင်တာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။
ကပ္ပတိန်အမေရိက ဘာလို့ သောရ်တူကို ကိုင်နိုင်တာလဲ?
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Worthy ဖြစ်လို့ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုက်တန်လို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ သောရ်ရဲ့တူ အကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ သောရ်ရဲ့တူဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် တူကို မကိုင်နိုင်ကြတဲ့ အဓိကအကျဆုံးအကြောင်းအရင်းကတော့ သောရ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ အာ့စ်ဂတ်ဘုရင်ကြီး အိုဒင်ရဲ့ ကျိန်စာကြောင့်ပါ။ အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင် တူဟာ လေးလွန်းလို့ ဒါမှမဟုတ် တခြားအကြောင်းကြောင့် မကိုင်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျိန်စာကြောင့်ပါ။
ပထမဆုံး သောရ်ဇာတ်လမ်း “Thor” မှာတုန်းက အာဏာစက်ကြီးပြီး တန်ခိုးကြီးလှတဲ့ သောရ်ရဲ့ဖခင် အိုဒင်က Mjolnir တူကြီးကို ကျိန်စာတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ “တူကို ထိုက်တန်လို့ ကိုင်နိုင်တဲ့သူဟာ သောရ်ရဲ့အစွမ်းကို ရရှိမယ်” လို့လည်း ကျိန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကပ္ပတိန်ဟာ တူကို ကိုင်မပြီး သားနို့စ်ကို တိုက်ခိုက်ချိန်မှာ သောရ်လို မိုးကြိုးကိုလည်း ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုထူးတာကတော့ သောရ်က တူမပါပဲလည်း မိုးကြိုးထုတ်နိုင်တဲ့ မိုးကြိုးနတ်ဘုရားပါ။
အဲဒီနေရာမှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာတာကတော့ တခြားဟီးရိုးတွေက Worthy မဖြစ်ဘဲ ဘာလို့ ကပ္ပတိန်ကျမှ Worthy ထဖြစ်ပြီး ကိုင်နိုင်တာလည်း ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ကပ္ပတိန်အမေရိကဆိုတာ ဒိုင်းကြီးကိုင်ပြီး ထိုးကြိတ် သတ်ပုတ်တာလောက်ပဲရတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်လို မြင်ထားရင်တော့ အဲဒီအချက်ကို နားလည်ဖို့ ခဲယဉ်း ပါလိမ့်မယ်။ Worthy ဖြစ်တယ် (ထိုက်တန်တယ်) ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ အပြင်ဘက်က စွမ်းဆောင်ရည်၊ စူပါပါဝါတွေ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပြီး နက်ရှိုင်းတဲ့ စိတ်နှလုံးကိုပဲ အခြေခံပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က The Avengers ဇာတ်လမ်းမှာ အင်အားကြီးမားလွန်းတဲ့ ဟော့ခ် (Hulk) ကြီးတောင် သောရ်တူနဲ့ အဖိခံထားခဲ့ရတာပါ။ Mjolnir ရဲ့ ထိုက်တန်မှုဆိုတာ ဘာတွေကိုပဲပေးဆပ်ရပါစေ၊ တခြားသူတွေအတွက် မားမားမတ်မတ် အသေခံရပ်တည်ပေးမယ့် နက်ရှိုင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်အရင်းခံနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ ကပ္ပတိန်အမေရိကဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ မိမိကိုယ်ကိုစတေးခံတဲ့ သူရသတ္တိရှိမှုရဲ့ သူရဲကောင်းပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ပထမဆုံး ကပ္ပတိန်အမေရိကဇာတ်လမ်း “Captain America: The First Avenger” မှာ စတိဗ်ရော်ဂျာဆိုတဲ့ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါသည် လူ့ဖလံလေးဟာ စစ်ထဲဝင်ခွင့်ရဖို့အရေး အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အစမ်းသပ်ခံကာလတုန်းကလည်း ဗုံးကို ကိုယ်နဲ့ဝပ်ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးက သူ့ကို စူပါစစ်သားအဖြစ် ဆေးရည်ထိုးပေးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရည်တီထွင်သူ သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ အဆိုအရ အဲဒီဆေးရည်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့သူတွေကို ထိုးရင် ခန္ဓာကိုယ်တင်မက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ တိုးတက်သွားစေတဲ့အကြောင်း၊ စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူကို ထိုးမိရင် စိတ်ဓာတ်ကိုပါ ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်မှာလည်း ဟိုက်ဒရာရဲ့ ဗုံးတွေရန်ကနေ နယူးယောက် မြို့ကြီးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သူ့အသက်ကိုစတေးပြီး လေယာဉ်ကို ရေခဲပြင်ထဲ ထိုးဆင်းပစ်ခဲ့သူပါ။ အဲဒီဇာတ်လမ်းမှာကတည်းက စတိဗ်ရော်ဂျာဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ အနစ်နာခံတတ်တဲ့ သူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့အကြောင်း ပေါ်လွင်စေခဲ့ပြီးပါပြီ။
တခြားဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း သူ့ရဲ့အနစ်နာခံ စွန့်စားမှုတွေပါဝင်ခဲ့သလို Endgame မှာလည်း ပျောက်သွား တဲ့ သက်ရှိတစ်ဝက်ကို ပြန်ခေါ်ဖို့အရေးမှာ သူခေါင်းဆောင်ပြီး လူပြန်စုကာ အဲဒီအကြံအစည်ကို ဖြစ်မြောက်စေခဲ့သူပါ။ တခြားစူပါဟီးရိုးတွေလို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်စရာ ဒိုင်းတစ်ခုကလွဲပြီး ဘာမှမရှိပေမဲ့ ရဲဝံ့စွန့်စားပြီး Thanos လို အကြမ်းဆုံးစူပါဗီလိန်ကြီးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Endgame ဒါရိုက်တာတွေဖြစ်တဲ့ Russo ညီနောင်ရဲ့ အဆိုအရ ကပ္ပတိန်အမေရိကဟာ ဟိုအရင်ကတည်းက သောရ်တူကို ကိုင်နိုင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ Avengers: Age of Ultron ဇာတ်လမ်းတုန်းက သောရ်တူကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဝိုင်းမတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း သူဟာ တူကို "မ" နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သူတစ်ယောက်တည်း ကိုင်နိုင်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့ သောရ်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို အနှောင့်အယှက်မပေးချင်တာကြောင့် “မ” မပြခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကပ္ပတိန် “မ” ချိန်မှာ တူ လှုပ်သွားတာကို သောရ်ကိုယ်တိုင် တွေ့လိုက်ပြီး ကွက်ခနဲမျက်နှာပျက်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ သောရ်ကလည်း အဲဒီကတည်းက ရိပ်မိနေခဲ့ပြီး Endgame မှာ ကပ္ပတိန်က တူကိုကိုင်ပြီး သူ့ကိုလာကယ်ချိန်မှာ “ငါသိတာပေါ့” လို့ ထုတ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Avengers ဇာတ်လမ်းတွေမှာ သောရ်ရဲ့တူကို ကိုင်နိုင်တဲ့ တခြားသူတွေလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ကတော့ သားနို့စ်နဲ့ ဗီးရှင်း (Vision) တို့ပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး သောရ်တူကို ကိုင်နိုင်တဲ့ အကြောင်း အရင်းက Infinity Stone တွေထဲက Mind stone ကြောင့်ပါပဲ။ ထိုက်တန်လို့ ကိုင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် သောရ်နဲ့ ကပ္ပတိန်လို မိုးကြိုးထုတ်ပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတော့ မရှိပါဘူး။ သောရ်ရဲ့လက်နက်သစ် Stormbreaker မှာတော့ Mjolnir လို အိုဒင်ရဲ့ကျိန်စာမရှိတာကြောင့် တချို့စူပါဟီးရိုးတွေ ကိုင်နိုင်ကြတာပါ။
ဘယ်လိုပဲအငြင်ပွားနေကြပါစေ။ သေချာတာကတော့ ကပ္ပတိန်အမေရိကဇာတ်ကောင်ဟာ Marvel Comic မှာကတည်းက သောရ်ရဲ့ Mjolnir တူကြီးကို ကိုင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Endgame မှာလည်း ကပ္ပတိန် အမေရိကတစ်ယောက် တူကြီးကို ကိုင်ပြီး သားနို့စ်ကို တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ အတော်လေးခမ်းနားခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းတွေထဲမှာလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Ref; Screen Rant, Bustle, IGN, Marvel and Captain America fan pages